Malawi Archives • Zivo SUCCESS
Quick Read Kuronga mhuri, hutano hwekubereka, uye kuverenga kwevanhu: Zvinobatanidzwa sei?
Lilian Kaivilu Chikumi 2, 2021
Wakambozvibvunza here kuti sei, kana zvachose, census uye zviitiko zveongororo zvine chekuita nekuronga mhuri uye hutano hwekubereka? Vanoita, zvishoma. Data yeCensus inobatsira nyika kuita sarudzo dzine ruzivo kana dzichigovera zviwanikwa ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa1696 Views
Q&A Dhata ndiyo yakakosha pakuita sarudzo dzakasimba dzehumbowo
Nekuita sarudzo dzakasimba dzinobva pauchapupu, data nenhamba zvakakosha. Kuve nechokwadi chekuronga kwakakodzera muhutano hwekubereka, chokwadi uye kuwanikwa kwe data iyi hakugone kusimbiswa zvakanyanya. Takataura naSamuel Dupre, nyanzvi yezviverengero ...
chat_bubble0 Comment kuonekwa2269 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa14261 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa4728 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa4524 Views
chat_bubble0 Comment kuonekwa20764 Views